iOS 13 - iPhone News | IPhone News (Pejy 2)
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 13.5.1 i Apple
Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.5.1, noho izany tsy afaka mampihena an'ity kinova ity izahay raha miaina olana ny fitaovantsika aorian'ny fanavaozana ny iOS 13.6
Fitsapana bateria: iOS 13.5.1 vs iOS 13.6
Isaky ny famoahana fanavaozana vaovao dia maro ireo mpampiasa manavao haingana ny fitaovany mba hanamarinana ...
Fanavaozana farany: iOS 13.6, watchOS 6.2.8 ary HomePod 13.4.8
Omano ny fifandraisana WiFi anao satria namoaka fonosana fanavaozana vaovao i Apple izay misy ny iOS 13.6, watchOS 6.2.8 ho an'ny ...
Mpampiasa marobe mitaraina amin'ny fantson'ny bateria avo lenta amin'ny alàlan'ny Apple Music amin'ny iOS 13.5.1
Voamarikao ve ny fitetezan'ny bateria ao amin'ny iOS 13.5.1? Mpampiasa maro no mitaraina amin'ny fanjifana batterie be loatra an'ny fampiharana Music any aoriana.
Ny bateria amin'ny iOS 13.5.1 ve tsy maharitra anao? Tsy ianao irery
Raha nandritra ny herinandro maromaro dia hitanao ny fihenan'ny terminal anao ary ny bateria dia tsy dia maharitra, dia vokatry ny iOS 13.5.1
iOS 13 dia hita amin'ny 92% an'ny iPhone 4 taona
Ny anjaran'ny iOS 13 ao amin'ny iPhone sy iPad natomboka teny an-tsena tao anatin'ny 4 taona lasa dia 92 sy 93% respivam, iray andro alohan'ny fampidirana ny iOS 14
I iOS 13.6 dia mahatadidy ny toerana famakiana ao amin'ilay lahatsoratra vakiantsika ao amin'ny Apple News
Ny kinova Beta vaovao an'ny iOS 13.6 dia manatsara ny Apple News hampahatsiahy antsika ny toerana nijanonantsika tamin'ny famakiana lahatsoratra iray ary hiverina any aminy avy eo.
Na dia tsy zakan'ny jailbreak intsony aza ny iOS 13.5.1, dia mbola tohana ihany ny beta an'ny iOS 13.5.5.
iOS 13.6 dia manampy ny fahafaha-manao / manafoana ireo fanavaozana mandeha ho azy
Apple dia namoaka ny Beta faharoa an'ny iOS 13.6 ho an'ny iPhone sy iPad (iPadOS 13.6 amin'ity tranga ity) ...
Ny kinova an'ny iOS mifanaraka amin'ny jailbreak farany farany, iOS 13.5, dia tsy misy intsony hanaovana sonia amin'ny alàlan'ny lohamilin'i Apple.
StopCOVID, loza iray manamarina fa tsy atokisana ny governemanta
Ny fampiharana ny fanarahan-dia ny governemanta France dia manamarina izay rehetra ahiahiana: loza io ao ...
Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.4.1 taorian'ny famoahana ny iOS 13.5
Ireo mpizara an'i Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.4.1, noho izany dia tsy afaka mametraka ny iOS 13.5 fotsiny isika raha averina amin'ny laoniny ny fitaovantsika.
Fampitahana ny androm-piainana misy eo amin'ny iOS 13.5 sy ny teo aloha
Ny kinova farany an'ny iOS misy amin'izao fotoana izao, dia maneho fanatsarana tsy mampino amin'ny angona azo avy amin'ny iPhone XR miaraka amin'ny iOS 13.4.1.
Hampiasa ny rafitra Apple sy Google i Espana amin'ny fampiharana ny fanarahan-dia
Hifidy ny Google sy ny Apple API i Espana amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fanarahan-dia izay ilaina amin'ny ady amin'ny virus corona
ID ID nohatsaraina hampiasaina amin'ny sarontava amin'ny iOS 13.5 sy iPadOS 13.5 efa misy izao
Ny kinova vaovao an'ny iOS 13.5 sy iPadOS 13.5 Golden Master dia manampy amin'ny fomba ofisialy ny zava-baovao mamoha ny iPhone amin'ny sarontava
Manao adala anao ve ny FaceTime miaraka amin'ny olona marobe? iOS 13.5 dia hamela ny fampandehanana mandeha ho azy
Ny iOS 13.5 vaovao, ankoatry ny fitondrana ny rafitry ny toerana misy ny Coronavirus, dia manome antsika ny fahafaha mamono ny zoom ao amin'ny vondrona FaceTime.
Ahoana ny fomba famonoana ny fanarahan-dia COVID-19
Miaraka amin'ny iOS 13.5, tonga ny lahasa ampiharin'i Google sy Apple, hanarahana ny fihetsiky ny olona mety voan'ny coronavirus
Apple dia namoaka ny iOS 13.5 Beta 3 miaraka amin'ny fampandrenesana COVID-19 Exposure
Apple dia nanangana ny iOS 13.5 Beta miaraka amin'ny vaovao mifandraika amin'ny ady amin'ny COVID-19 ary fanatsarana ny famohana rehefa manao sarontava isika.
Ny fihetsika rehetra azonao ampiasaina amin'ny Trackpad amin'ny iPad
Atorinay anao ireo fihetsika rehetra azonao atao amin'ny alàlan'ny trackpad mifandray amin'ny iPad anao, ary koa ireo fitaovana izay mifanaraka amin'ireo fihetsika ireo.
Apple dia namoaka ny iOS 13.4.1 ho an'ny iPhone SE alohan'ny hanombohana azy
Raha nitahiry ny iPhone SE vaovao ianao, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manavao izany amin'ny kinova vaovao an'ny iOS izay natombok'i Apple ho an'ity terminal ity.
Nohavaozina i Ferrite mba hanatsarana ny fifanarahana trackpad sy ny totozy
Ferrite dia fampiharana fanovana audio tsara ho an'ny iPhoen sy iPad izay vao nohavaozina mba ho 100% trackpad sy mouse mifanaraka.
Fampitahana ny fiainana bateria amin'ny iOS 13.4.1, iOS 13.4 ary iOS 13.3.1
Ny fanavaozana farany azo alaina ho an'ny iOS, laharana 13.4.1, dia saika tsy misy fiatraikany amin'ny fiainana bateria saika ny maodely rehetra afa-tsy ny iPhone XR.
Ahoana ny fanitsiana ny hafainganan'ny valin'ny 3D Touch sy ny valiny haptic
Tamin'ny famoahana ny iOs 13, nanitatra ny endri-javatra haptic sensor i Apple mba hanampiana hetsika haingana sy bebe kokoa ...
Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.3.1 taorian'ny famoahana ny kinova farany an'ny iOS 13.4
Rehefa mitsahatra tsy manao sonia ny iOS 13.3.1 ianao dia tsy azo atao intsony ny mametraka an'ity kinova iOS ity amin'ny fitaovanao, ny iOS 13.4 ihany no azonao apetraka
Apple dia mandefa ny beta voalohany amin'ny iOS 13.4.5
Apple dia namoaka ny beta voalohany an'ny iOs 13.4.5 miaraka amin'ny iPadOS, tvOS ary macOS 10.15.5 manamboatra bug ary manatsara ny fitoniana.
IOS 13.4 dia misy izao ary miaraka amin'ireo vaovao rehetra ireo
Betsaka ny orinasa eran-tany izay nanadino telefaonina mba tsy hampijanona tanteraka ny orinasa, ...
Ahoana ny fomba handaminana ny bokotra totozyo amin'ny iPadOS
Asehonay aminao ny fomba handefasana ny totozy amin'ny iPad hanomezana fiasa samihafa isaky ny bokotra tsirairay, hanova ny tondro ary hampiasa ireo zoro mavitrika.
Tsy mandeha tsara ny teboka fidirana manokana fa efa an-dàlana ny vahaolana
Ny teboka fidirana manokana dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy fa ny olana dia efa fantatr'i Apple miaraka amin'ny vahaolana eny an-dalana
Toy izany no fiasan'ny totozy ao amin'ny iPadOS 13.4
iPadOS 13.4 dia mamela antsika hampiasa totozy Bluetooth sy trackpads amin'ny iPad. Atorinay anao ny fomba fiasan'ity endri-javatra vaovao ity amin'ny horonan-tsary.
Apple dia mandefa ny Beta fahefatra an'ny iOS 13.4 sy sehatra hafa
Apple dia nandefa ny Beta fahefatra an'ny iOS 13.4, ary koa ny iPadOS, tvOS ary macOS, izay manakaiky kokoa ny kinova farany mety ho tonga amin'ity volana ity
Apple dia manamboatra fitaovana famerenana amin'ny laoniny tsy mila solosaina
Ora vitsy lasa izay, Apple dia nanangana ny Beta fahatelo an'ny iOS 13.4, kinova vaovao izay misy vaovao miafina manan-danja ...
iOS 13.4 dia hamela antsika hisafidy ny kalitaon'ny fampidinana sy ny fandefasana ny fampiharana TV
Apple dia hamela ny safidin'ny kalitaon'ny horonantsary rehefa mandefa na misintona azy amin'ny fampiharana TV ao amin'ny iOS 13.4 manaraka.
WhatsApp amin'ny maody maizina dia misy ao amin'ny Beta for iOS izao
WhatsApp dia efa manana ny maizimaizina misy amin'ireo mpampiasa izay manandrana ny Beta amin'ny alàlan'ny TestFlight, tafiditra ao amin'ny iOS 13
Inona no vaovao ao amin'ny iOS sy iPadOS 13.4 beta 2 navoaka omaly
Inona no vaovao ao amin'ny iOS sy iPadOS 13.4 beta 2 navoaka omaly? Ny fanovana ny atin'ny fahita amin'ny fahitalavitra, ny bara mailaka novaina ary alefaso amin'ny hafatra ny CarKey anao.
Ahoana ny fampiasana fitateram-bahoaka amin'ny Apple Maps
Atorinay anao ny fomba fiasan'ny safidin'ny Maps Public Transport vaovao, miaraka amin'ireo safidy rehetra atolotray azy ireo, izay tsy vitsy.
Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.3 taorian'ny famoahana ny iOS 13.3.1
Tsy azo atao intsony ny mihena amin'ny iOS 13.3 satria nijanona tsy nanao sonia azy nandritra ny ora vitsivitsy i Apple.
Ireo ny vaovaon'ny iOS 13.4
Apple dia nanangana ny Beta voalohany an'ny iOS 13.4 ora vitsy lasa izay, ary mitondra izany vaovao mahafaly izany, ny sasany tsy nampoizina
Apple dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny kinova 13.3.1 an'ny iOS sy iPadOS
Apple dia nandefa tamin'ny fomba ofisialy ny kinova vaovao an'ny iOS 13.3.1 ho an'ny rehetra miaraka amin'ny fanatsarana mifantoka mivantana amin'ny famahana ny bibikely
Asa ny fanaraha-maso ny fiainana manokana IOS 13: tsy dia mitsikilo antsika izy ireo izao
Ny fifehezana ny tsiambaratelo ao amin'ny iOS 13 dia miasa: mitsikilo kely antsika izy ireo izao. Hatramin'ny volana oktobra, ny data GPS tafaporitsaka dia nidina 68 isan-jato.
Fomba fampiasana ny tontolo iainana HomeKit sy ny mandeha ho azy
Azavainay ny fomba ahafahanao mampiasa ny HomeKit Environments and Automations, ny safidy fanaingoana ananany ary ohatra azo ampiharina.
Navoaka ny mpamorona IOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, tvOS 13.3.1, ary macOS Catalina 10.15.3
Apple dia efa miasa amin'ny bibikely izay mamela ny bypassing ny fifandraisana Limits Communication
Ny fiasa vaovao Limits Communication dia mampiseho bug izay mamela ny zaza tsy ampy taona handingana ny fetran'ny fetra antso
HomePod koa dia manavao ny iOS 13.3
HomePod koa dia manavao ny iOS 13.3 toy ny sisa amin'ireo fitaovana Apple
iOS 13.3 akaiky kokoa sy akaiky kokoa miaraka amin'ny Beta fahefatra misy ankehitriny
Apple dia namoaka ny beta fahaefatra an'ny iOS 13.3, iPadOS 13.3, watchOS 6.1.1 ary tvOS 13.3, miaraka amin'ny kinova farany manakaiky kokoa.
Apple dia manome antoka fa ny heverina fa "bug" izay manohy mampiasa ny toerana misy anao dia fandidiana mahazatra
Diso fa manohy manangona ny toerana misy anao i Apple na dia tsy nataonao kilemaina aza izy io ao amin'ny rafitry ny rafitra, ary hazavainay ny antony.
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 13.2.2 i Apple
Nandritra ny ora vitsivitsy dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.2.2 i Apple, ka ny hany dikan-iOS azontsika apetraka amin'izao fotoana izao dia ilay nosoniaviny ankehitriny: iOS 13.2.3
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 13.2 i Apple
Ireo mpizara an'i Apple dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 13.2, ary ny iOS 13.2.2 no hany dikan-teny nosoniavina ankehitriny.
Ny beta faharoa an'ny iOS 13.3 sy iPadOS 13.3 dia azo alaina ho an'ny mpamorona ankehitriny
Ny iOS 13.3 sy iPadOS 13.3 developer beta faharoa dia azo alaina ho an'ny vondrom-piarahamonina mpamorona ankehitriny.
Ny tetika iOS 13 tsara indrindra
Asehonay aminao ny tetika tsara indrindra hikirakirana ny iOS 13 toy ny manam-pahaizana ary tsy mitana lohateny lehibe amin'ny fanamarihana izany.
Ny mpampiasa sasany dia mimenomenona amin'ny fanjifana batterie betsaka an'ny iOS 13.2.2.
Toa ny olana vaovao amin'ny iOS sy iPadOS 13.2.2 dia mety hiteraka olana amin'ny fizakan-tena amin'ny fitaovana sasany. Mitranga aminao
Tsia, tsy ilaina ny manakatona fampiharana, miaraka amin'ny fanidiana mandeha ho azy iOS 13.2 dia matetika kokoa aza
Toa nanova ny fomba fiasan'i Apple amin'ny fitantanana fampiharana ao ambadika miaraka amin'ny iOS 13.2 i Apple ary mihidy haingana kokoa izy ireo.
Ahoana ny fomba hifehezana ny HomeKit miaraka amin'ny tag NFC
Azavainay ny fomba hifehezana ny kojakoja, ny tontolo iainana ary ny mandeha amin'ny fiara miaraka amin'ny tag NFC tsotra izay azontsika vidiana amin'ny vola kely
Ny iOS 13.2 izao dia misy amin'ny Deep Fusion ho an'ny iPhone 11
AirDrop dia mety tsy hahomby amin'ny iPhone 11 miaraka amin'ny iOS 13.1.3
Olana amin'ny chip U1 no mahatonga ny iPhone 11 hanana olana amin'ny fiasa AirDrop, izany ve no raharahao?
Ny maody maizina an'ny iOS 13 ve mamonjy ny ainy bateria? Eny ary betsaka
Ny maody maizina izay avy am-pelatanan'ny iOS 13 dia mamela ny maodelin'ny iPhone misy efijery OLED, mitahiry bateria hatramin'ny 30%.
Ny ankizy sasany mahita ny lavaka rehetra amin'ny hidin'ny fiarovana Airtime
Apple ao amin'ny crosshairs amin'ny tsy fahafahany manome antoka ny hidin-trano izay mahatonga ny Time of Use noho ny fahitan'ny ankizy ny hitsin-dàlana rehetra mamoha.
55% amin'ireo iPhone navoaka tato anatin'ny efa-taona lasa dia efa manana ny iOS 13
Ao amin'ny Apple dia mampiseho tarehimarika ofisialin'ny tahan'ny fananganana ny rafitra fiasa iOS 13 izy ireo ary efa eo amin'ny 55% amin'ny totalin'izany
Apple dia namoaka ny iOS 13.1.3 ho an'ny mpampiasa rehetra misy fanamboarana maro
Apple dia mamoaka kinova vaovao an'ny iOS 13.1.3 miaraka amina amboarina amboarina amam-bika. Vaovao farany faran'izay haingana izay manampy fanatsarana maro
Emoji vaovao ao amin'ny iOS 13.2 Beta 2
Emojis Vaovao hita ao amin'ny New iOS 13.2 Beta 2 Developer Update
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 13.1 i Apple
Tsy azo atao intsony ny mihena amin'ny kinova iOS 13.1.2 teo aloha, satria nanomboka tamin'ny Cupertino dia najanon'izy ireo ny sonia ny kinova taloha rehetra.
"Midira miaraka amin'i Apple" dia manitsakitsaka ny patantin'ny mpamorona Blue Mail
Ny Sign in miaraka amin'ny asan'ny Apple dia mety hampiasa patanty voasoratra anarana avy amin'ny mpamorona ny fangatahana Blue Mail ho an'ny iOS sy Android.
Ahoana ny fomba hamafana ny fampiharana amin'ny iPhone amin'ny iOS 13
Raha mbola tsy nahita fomba hamafana ny rindranasa ao amin'ny iOS 13 ianao dia manazava ny fomba hanaovana izany haingana sy mora izahay
Nijanona ny fanaovan-tsonia ny dikan-teny firmware alohan'ny iOS 13.1.2
Tsy miverina amin'ny kinova intsony alohan'ny iOS 13.1.2 miaraka amin'ny fitaovan'ny finday Apple. Niato fotsiny i Apple nanasonia ireo kinova taloha.
Ahoana ny fomba fihainoana ny radio amin'ny iPhone, iPad, ary HomePod anao
iOS 13 dia mamela anao hihaino radio tsy mila fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo, avy amin'ny Apple Music application mihitsy.
Manomboka mahazo sarintany nohatsaraina avy any Apple i New York
Ny sarintany nohatsaraina ao amin'ny app iOS Maps dia manomboka mahatratra mpampiasa marobe ao New York City
Ahoana ny fanavaozana ny fampiharana amin'ny iPhone sy iPad amin'ny iOS 13
Ny iOS 13 dia azo zahana amin'ny mpampiasa rehetra izay manana iPhone 6s na avo kokoa. Isaky ny vaovao ...
Ahoana ny fomba famindrana angona avy amin'ny iPhone iray mankany amin'ny iray hafa
Azavainay ny fomba ahafahantsika mamindra ny angona rehetra avy amin'ny iPhone iray mankany amin'ny iray hafa, tsy mila solosaina ary miaraka amina fomba fanao mandeha ho azy tena tsotra.
Hifehy ny firaisana ara-nofo ataonao amin'ny iOS 13
Ny iOS 13 dia misy amin'ny mpampiasa rehetra izao
Ny kinova vaovao an'ny iOS 13 dia azo alaina dieny izao. Aza miandry intsony ary manavao ny fitaovanao
Miaraka amin'ny famoahana ny iOS 13, hanavao na hamerina amin'ny laoniny ve aho?
Miaraka amin'ny famoahana kinova vaovao an'ny iOS, mpampiasa maro no manontany tena amin'ny tenany roa: manavao na mametraka avy hatrany am-boalohany. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny tombony sy ny fatiantoka amin'ny safidy tsirairay
Ny filoha lefitra Senior an'ny lozisialy Apple Craig Federighi dia nanamafy fa nieritreritra ny hanampy hafatra voarindra amin'ny iMessage ...
Misy fiasa 5 vaovao iOS 13 izay tsy ho hita amin'ny andro fanombohana
Misy fiasa vaovao 5 ao amin'ny iOS 13 izay tsy ho hita amin'ny andro fanombohana, fa ho tafiditra ao amin'ny iOS 13.1
Ahoana ny fomba hiverenana amin'ny iOS 13 aorian'ny fametrahana ny iOS 13.1 beta
Raha te hijanona tsy ho anisan'ny programa beta ampahibemaso an'ny Apple ianao, ary hamela ny iOS 13.1 amin'ny beta, dia hasehontsika anao ny fomba.
Ahoana ny fikarohana ny iPhone, iPad na Mac anao na dia tsy misy fifandraisana Internet aza
iOS 13 dia hamela anao hahita ny iPhone, iPad ary Mac anao very na dia tsy manana fifandraisana Internet aza izy ireo noho ny fampiharana Search.
Ny beta voalohany an'ny iOS 13.1 dia azo alaina ho an'ny mpamorona ankehitriny
Raha mamaky tsara ianao. Tsy hadisoana amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra io (olombelona isika ary indraindray ...
IOS 8 Beta 13, iPad OS, tvOS 13, ary watchOS 6 ho an'ny mpamorona
Apple dia mamela ny kinova beta 8 an'ny iOS 13, iPad OS, tvOS 13 ary watchOS 6 eo am-pelatanan'ny mpamorona.
Navoaka ny beta faha-13 an'ny iOS XNUMX sy iPadOS ho an'ny mpamorona
Navoaka ho an'ny mpamorona ny beta faha-13 an'ny iOS XNUMX sy iPadOS. Ity no kinova farany navoaka hatramin'izao.
Ireo mpandrindra ny fampiharana IOS dia manana ny beta fahenina amin'ny andiany fahatelo ambin'ny folo an'ny iOS eo am-pelatanany.
Apple mandefa Beta 5 an'ny iOS 13, iPadOS ary tvOS 13
Apple dia nandefa ny betas vaovao an'ny iOS 13, iPadOS ary tvOS 13, ka mahatratra ny Beta 5 amin'ireo sehatra ireo, amin'izao fotoana izao ho an'ny mpamorona ihany.
Sarintany Apple: Ohatra amin'ny multitasking tena izy amin'ny iPadOS
iPadOS dia manome ny fahaizana mamorona birao isan-karazany miorina amin'ny tena multitasking miaraka amin'ny rindranasa samihafa toa ny Apple Maps.
iOS 13 dia manana fampandrenesana izay mampahafantatra momba ny toerana ao aoriana
Nanampy fiasa i Apple ao amin'ny iOS 13 izay ampahafantarina ny mpampiasa momba ny fampiharana izay nandrakitra toerana ao aoriana.
Sintomy izao ny beta ampahibemaso fahatelo an'ny iOS 13 sy iPadOS
Aorian'ny famoahana ny kinova beta fahefatra an'ny iOS 13 ho an'ny mpamorona, Apple dia mandefa ny beta ampahibemaso fahatelo an'ny iOS 13. Lazainay aminao ny fomba hanandramana azy!
Ity no iPadOS Multitasking vaovao
iPadOS dia mitondra fanatsarana maro ho antsika amin'ny multitasking izay ahafahantsika miditra amin'ny rindranasa marobe amin'ny fotoana iray, misintona singa na misokatra fampiharana haingana.
Ireo ny vaovaon'ny iOS 13 Beta 4
Lazainay aminao izay vaovao ao amin'ny iOS 13 Beta 4 toy ny bokotra vaovao handaminana indray ireo sary masina, fanatsarana ny rafitra fanairana ary fanatsarana ny rafitra 3D Touch.
Apple mandefa Beta 4 an'ny iOS 13, iPadOS ary watchOS 6
Apple dia namoaka ny Beta fahefatra an'ny iOS 3, iPadOS, tvOS 13 ary watchOS 6 izay tsy misy afa-tsy ho an'ireo mpandraharaha voasoratra anarana.
Ireo no bug sy error fahita indrindra ao amin'ny iOS 13 Beta 3
Ny iOS 13 Beta 3 dia tsy misy lesoka sy boka izay mahatonga ny fampiasana azy ho sarotra kokoa, ireo no fahita indrindra hitanay tamin'ny fanavaozana farany ny rafitra fiasan'ny orinasa Cupertino.
Beta vaovao 3 sy Beta ho an'ny daholobe faharoa an'ny iOS 13 sy iPadOS efa misy izao
Apple dia namoaka kinova nohavaozina an'ny iOS 13 Beta 3 izay misy ny iPhone 7 sy 7 Plus, ary ny Public Beta faharoa an'ny iOS 13
iOS 13 sy macOS Catalina dia mamela anao hiditra iCloud amin'ny alàlan'ny Face ID na Touch ID
Apple dia manampy amin'ny iOS 13 sy iPadOS ny fahafahana miditra amin'ny kaonty iCloud-nao amin'ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny Face ID sy Touch ID.
Ireo no zava-baovao ateraky ny fampiharana Notes amin'ny iPadOS
iOS 13 sy ny iPadOS vaovao dia mitondra andian-dahatsoratra vaovao mahaliana ny fampiharana Notes, izay manatsara azy io ary mahatonga azy io ho maro karazana kokoa.
Fihetsika iPadOS rehetra
iPadOS dia ahitana fihetsika vaovao marobe izay mamela anao hanao asa haingana kokoa, manao izay hahamety kokoa ny asa fifidianan-tsoratra, sns.
Apple dia nanisy fanitsiana ny fijerinay amin'ny FaceTime ao amin'ny iOS 13
Apple dia manampy safidy vaovao ao amin'ny iOS 13 izay manitsy ny fijerintsika mandritra ny fiantsoana FaceTime hahafahantsika mijery ilay olon-kafa.
Apple dia namoaka kinova beta fahatelo an'ny iOS 13, iPadOS, macOS Catalina ary tvOS 13
IOS 3, iPadOS, macOS Catalina ary tvOS 13 beta 13 dia azo alaina ho an'ny mpamorona ankehitriny
iOS 13 izao dia mamela anao hihaino radio mivantana amin'ny alàlan'ny Apple Music nefa tsy mila fampiharana
Ny fampiharana radio amin'ny antoko fahatelo dia mety ho voamarina ao amin'ny iOS 13. Apple dia miasa anio amin'ny beta amin'ity OS ity ny onjam-peo ao amin'ny Apple Music
Misy izao ny beta ampahibemaso voalohany an'ny iOS 13. Asehonay anao ny fomba fametrahana azy
Ny beta ampahibemaso voalohany an'ny iOS 13 dia efa misy izao, na ho an'ny iPhone na iPad, ka ireo ...
Ity no iOS 13 CarPlay vaovao
Asehonay anao ny fanovana lehibe indrindra nanjo ny CarPlay vaovao izay ho tonga miaraka amin'ny iOS 13: havaozina tanteraka ny Maps, Music ary Podcasts
Ny beta faharoa an'ny iOS 13 dia ahafahantsika mifandray amin'ireo mpizara SMB avy amin'ny fisie Files
Miaraka amin'ny iOS 13 dia tonga ny fisokafan'ny fisie Files ho an'ny mpizara ivelany noho ny protokol SMB, efa azo zahana amin'ny iOS 13 Beta 2 izy io.
Podcast 10 × 34: Famaranana amin'ny famaranana ny vaovao Apple
Vitanay ny vanim-potoana fahafolo tamin'ny Podcast namakafaka ny vaovao rehetra momba ny rindrambaiko izay natolotr'i Apple tamin'ny 2WWDC 2019,…
Mampahafantatra antsika ny iOS 13 rehefa mamafa ny rindranasa izay misy fisoratana anarana mavitrika
Ny kinova beta vaovao an'ny iOS 13 dia mampiseho amintsika ny fisoratana anarana mavitrika rehefa mamafa ny rindranasa ao amin'ny fitaovantsika izahay
iOS 13 Beta 2 dia mitondra antsika ny maody High-Key Mono sy ny fipetrahan'ny hazavana ho an'ny sary
Ireo tovolahy ao amin'ny Apple dia manampy ny high-Key Mono vaovao sy ny tarehin-jiro ho an'ny maody sary amin'ny beta faharoa amin'ny iOS 13.
Misokatra ny NFC an'ny iPhone ary any Alemana dia hifanaraka amin'ny DNI sy ny Passport ny olom-pireneny
Any Alemana, vao voamarina fa ao amin'ny iOS 13 ny NFC an'ny iPhone dia hifanaraka amin'ireo antontan-taratasy ofisialy, ID, pasipaoro, sns ...
Mpahafa iray mahavita manamboatra iOS 13 beta 1 amin'ny iPhone 6
Mpankafy iray izay milaza fa nametraka ny iOS 13 amin'ny iPhone 6 ary nilaza fa handefa IPSW hahafahantsika mametraka azy koa.
iOS 13 dia hampifanaraka ny HomePod amin'ny alàlan'ny jirony LED
Ny iOS 13 dia natolotra tamin'ny fiandohan'ny volana Jona tao WWDC, miaraka amin'ireo kinova vaovao an'ny watchOS, tvOS, macOS ...
3D Touch dia tsy maty, manamafy i Craig Federighi
iOS 13 dia toa nanala ny 3D Touch mandrakizay, fa araka ny nohamafisin'i Craig Federighi dia bibikely ary hiverina amin'ny Beta manaraka
Ny horonantsary HomeKit Secure vaovao an'ny Apple dia mila drafitra iCloud miaraka amin'ny 200GB na 2TB
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia manamafy toerana malalaka mandritra ny 10 andro ho an'ny horonantsary HomeKit Secure Video raha toa ka mandoa drafitra iCloud izahay.
Apple dia mamela ny baolina any amin'ny kianja Spotify
Apple dia nanome ny fitaovana Spotify ka ny fampiharana azy dia manana fiasa mitovy amin'ny Apple Music, ankehitriny inona?
Ny tetika rehetra ampidirin'i Safari ao amin'ny iOS 13 [VIDEO]
iOS 13 dia "eo an-joron-trano" ary araka ny nampanantenainay anao tamin'izany fotoana izany, hanandrana ...
Ahoana ny fampiasana totozy amin'ny iPad
Nanapa-kevitra ihany i Apple tamin'ny farany hanome ny safidy fampiasana totozy miaraka amin'ny iPad, zavatra iray izay efa nitaky hatry ny ela ny mpampiasa. Manazava ny fomba
iOS 13 dia mamela antsika hamafa apps mivantana avy amin'ny lisitr'ireo fanavaozana vaovao
Apple manova ny fomba hamafana ny fampiharana ao amin'ny iOS 13, ankehitriny dia tsy maintsy mandeha amin'ny mombamomba ny App Store izahay hanavao na hamafana.
Ity no tonian-tsarimihetsika vaovao ao amin'ny iOS 13
Anio dia asehonay anao ny zava-baovao atolotray ao amin'ny tonian-dahatsary iOS 13 vaovao, ny endrika nohavaozina ary ny fiasa vaovao.
iOS 13 dia mametra ny fidirana amin'ny "Notes" ao anatin'ny fifandraisana
iOS 13 dia manampy fiasa vaovao iray izay manakana ny rindranasan'ny antoko fahatelo tsy hiditra amin'ny fampahalalana "Notes" an'ireo mpifandray
Ireto no bug sy hadisoana lehibe indrindra amin'ny iOS 13 Beta 1
Androany izahay mitondra anao ny lisitry ny lesoka sy hadisoana fahita indrindra hitanay tao amin'ny iOS 13 miaraka amin'ny dingana beta voalohany.
Apple dia mametraka sakana bebe kokoa amin'ny fametrahana betas an'ny iOS 13 sy iPadOS
Apple dia manampy fepetra hafa ankoatry ny fisintomana sy ny fametrahana ny piraofilina hametrahana kinova beta an'ny iOS 13 sy iPadOS
IPad Mahazo Fanohanana amin'ny Mouse noho ny iPadOS
Amin'ny fahatongavan'i iOS 13 sy iPadOS dia afaka mampifandray totozy amin'ny iPad ihany izahay amin'ny farany hahafahana mitantana azy tsara nefa tsy mifanerasera amin'ny efijery
iOS 13 sy iPadOS: ny vaovao rehetra natolotr'i Apple
Efa fantatray ny vaovao lehibe izay hitranga avy amin'ny andiany manaraka an'ny iOS 13, vaovao hotantarainay anao amin'ity lahatsoratra ity.
Podcast 10 × 33: Ny rehetra momba ny iOS 13, iPadOS, watchOS 6, macOS 10.15 ary tvOS 13
Amin'ity herinandro ity ao amin'ny podcast anay dia mamakafaka ny vaovao rehetra momba ny iOS 13, iPadOS, watchOS 6, macOS 10.15 ary tvOS 13 izahay taorian'ny fampisehoana ny Apple
Ireo fihetsiketsehana nataon'i Apple tao anatin'ny ora farany dia manondro fa ny tsaho momba ny fanjavonan'ny iTunes dia azo hamarinina rahampitso
Araho ny WWDC 2019 mivantana amin'ny iPhone News
Araho mivantana ny WWDC 2019 miaraka amin'ny vaovaon'ny iOS 13, macOS 10.15 ary jereoOS 6 ao amin'ny fantsona YouTube anay sy amin'ny iPhone News.
Ny antenainay fa ho hitantsika amin'ny WWDC 2019
Fintinoinay izay mety ho vaovao lehibe indrindra izay hatolotr'i Apple amin'ny Alatsinainy faha-3 amin'ny WWDC 2019 amin'ny rindrambaiko sy fitaovana.
Ny iPhone vaovao dia tsy hitondra 3D Touch amin'ny maodely rehetra
Apple dia hisintona ny 3D Touch amin'ny maodely iPhone vaovao ho an'ny Haptic Touch izay efa ananan'ny iPhone XR tamin'ny taona lasa
Izay rehetra fantatsika momba ny iOS 13 hatreto
Akaiky kely ny iOS 13 tamin'ny fahatongavan'i WWDC 2019. Nandinika ny angona rehetra fantatray momba ny rafitra fiasa izahay hatreto.
iOS 13 dia mety tsy mifanaraka amin'ny iPhone SE
Nisy tsaho vaovao nilaza fa mety tsy hahatratra ny iPhone SE ny iOS 13 amin'ny kinova farany, fantsona iray izay mizara fitaovana mitovy aminy amin'ny iPhone 6s
Hevitra vaovao miendrika endrika izay hitantsika tao amin'ny iOS 13
Ity foto-kevitry ny iOS 13 ity dia mampiseho hevitra mahaliana izay afaka ho hitantsika ho toy ny fanavaozana ny multitasking na ny maha matihanina ny iOS.
Ity hevitra mahavariana an'ny iOS 13 ity dia mampiseho ny mety mifanentana amin'ny Magic Mouse
Ity foto-kevitra iOS 13 ity dia mampiseho ny valin'ny fampidirana ny Magic Mouse amin'ny tontolo iOS sy iPad ary tena mety miasa io.
Siri dia afaka mivoatra ary lasa manan-danja kokoa amin'ny iOS 13
Ny tatitra farany dia milaza fa hanana fahazoana solvency bebe kokoa i Siri amin'ny kinova vaovao an'ny iOS 13 izay haseho ao amin'ny WWDC 2019.
iOS 13 dia hamela ny fanafarana rakitra avy amin'ny fitaovana ivelany mankany amin'ny fampiharana
iOS 13 dia afaka manafatra sary sy horonantsary avy amin'ny tahiry ivelany mivantana any amin'ireo rindranasa fahatelo na tsy mandalo ny fampiharana Photos aza
iOS 13 dia afaka nanampy ny fanohanana ny totozy amin'ny iPad
Raha ny fanazavan'ilay mpampanonta fanta-daza Federico Viticci, iOS 13 dia afaka nanampy fanohanana ny totozy na ny TrackPad.
iOS 13 dia hitondra fiasa vaovao maro, indrindra ho an'ny iPad
Ny famoahana voalohany dia mipoitra momba ny vaovao hiseho ao amin'ny iOS 13, kinova iray tena mifantoka amin'ny fanatsarana ny iPad
Io no hevitra tsara indrindra hatreto amin'ny iOS 13 ho an'ny iPad
Léo Vallet dia namoaka hevitra vaovao momba ny iOS 13. Tamin'ity indray mitoraka ity dia mifantoka amin'ny fampiasana azo omena ny iPad amin'ity tontolo ity izy.
Ity foto-kevitry ny iOS 13 ity dia mampiseho ny mety rehetra mety hananan'ny iOS
Amin'ity foto-kevitry ny iOS 13 ity dia mahita asa vaovao mihoatra ny 40 isika izay azo aseho amin'ny WWDC 2019 miaraka amin'ireo rafitra miasa sisa.
Fandikana vaovao an'ny iPhone misy fakan-tsary telo sy maody maizina ao amin'ny iOS 13
Fanovana vaovao an'ny iPhone izay hasehon'i Apple amin'ity taona ity miaraka amin'ny zava-baovao izay mampiseho amintsika ny fomba maizina amin'ny iOS 13 ho avy
Fitaovana marobe marobe no tavela nefa tsy mahazo iOS 13 araka ny lisitra fampifanarahana tafaporitsaka
iOS 13 dia saika aseho amin'ny WWDC 2019 amin'ny volana Jona. Ary arak'izay…
iOS 13 miaraka amin'ny maody maizina, iPhone misy fakan-tsary Triple ary USB-C ho an'ny 2019
Bloomberg dia manome antsika antsipiriany momba ny drafitr'i Apple ho an'ny 2019 sy 2020, manamafy ny fakan-tsary telo ary ny fanovana lehibe ao amin'ny iOS 13
iOS 13 dia manomboka miseho ao amin'ny statistikan'ny fitsidihana
Ny fitsidihan'ny fitaovana miaraka amin'ny iOS 13 dia nitombo tato anatin'ny volana vitsivitsy, tao amin'ny tranokalan'ny haino aman-jery Apple.
Hevitra IOS 13: Widget an'ny efijery an-trano, fomba maizina ary fanavaozana ny endrika fampandrenesana
Manomboka ny vanim-potoanan'ny hevitra. Amin'ity tranga ity, ny foto-kevitry ny iOS 13 dia aseho miaraka amin'ny maody maizina sy ny fanavaozana tanteraka ny fampandrenesana.